Proverb 708 Ataovy anatra imaso hifanatrehana , fa raha takona tonga fosa . [Rajemisa 1985]
Proverb 4005 Mba ataovy toy ny voankazo an' ala ny anatra omen' ny olona ny tena , ka ny mangidy aloa ary ny mamy atelina . [Veyrières 1913 #6512]
Proverb 4638 Mpiasabe vonton' anatra : any an-tsena avy no manao "mbay lalana ". [Rajemisa 1985]
Proverb 4906 Ny ana-dray aman-dreny toy ny tsipak' ombalahy , mahavoa mahafaty , tsy mahavoa mahafanina . [Rinara 1974 #2865]
Malagasy interpretation Enti-milaza ny tsy tokony hanaovana tsinontsinona ny tenin- -dray aman-dreny . [Rajemisa 1985]
Proverb 4923 Ny anatra ataovy toy ny hazo : Hazony raha manendrika anao, avelao hihazohazo raha tsy azoazonao. [Rinara 1974]
Proverb 4925 Ny anatra , vahiny : tiana , mody mandry ; tsy tiana , mitampody . [Houlder 1895 #1588, Veyrières 1913 #6521, Cousins 1871 #2157]
Proverb 4934 Ny an-drano reny no mifananatra , ka ny kamboty no hendry aloha. [Cousins 1871, Veyrières 1913]
Proverb 6705 Tadinin-tona , sofin’ amalona : tadinin' ny ho faty tsy mitaino anatra . [Samson 1965 #T2]